Muj: Cali Guray Oo Sheegay Musuqmaasuqa Dalka Ka Dhacay Inay Galeen Xirsi Iyo Cabdirasaaq Khaliif + Hogaamintii Ciro Ee Golaha Wakiilada | Marsa News
Muj: Cali Guray Oo Sheegay Musuqmaasuqa Dalka Ka Dhacay Inay Galeen Xirsi Iyo Cabdirasaaq Khaliif + Hogaamintii Ciro Ee Golaha Wakiilada
September 26, 2017 - Written by editor marsan
Hargaisa:(Marsanews) Marka aynu runta ka hadlayno eedaha xukuumaddan uu mucaaridku u jeediyo marka aynu ilaahay ka baqayno waa dhacdooyinkii shantii sanadood ee hore ee ka horeeyay muddo kordhinta laba sanadood iyo dheeraadka noqonaysa. Waxay noqon lahaydba, kuwii eedahaa galay ee iyagu ka masuulka ahaa waxay ahaayeen labada wasiir ee hore waa kii madaxtooyada iyo kii Hawlaha Guud eh oo iyagu isku shaqaysan jiray marka ay tahay hantida ay ka hadlayaan ee la lunsaday.
Gari Alleh ayay taqaane, Wasiirkii hore ee Madaxtooyada iyo saaxiibkii iyaga oo xambaarsan eedihii ay galeen waxay hadh cad kula biireen xisbiga WADDANI oo ay gacansaar lahaayeen Gudoomiyihii Aqalka Wakiilada oo isaga laftiisu culayska ay xambaarsan yihiin mid ka culus xambaarsan oo masuulka koobaad ka ah wixii ka xumaaday sharcidejinta uu mudada 12ka sanadood ah uu isagu gudoomiyaha ka ahaa. Isku soo wada daroo eedaha iyo dembiyada ay galeen sedexdan masuul iyo wixii qaladba dhehoo inta dalka ka dhacay intii ay sedexdan masuul ka sii maqnaayeen xilalkii ay qaranka u hayeen iyo intii ay xilalka hayeen eedaha ay galeen miyay noqon karaan laba la is barbar dhigi karo? Anigu waxan leeyahay maya ee hadii si run ah loo xisbtamo iyaga sedexdooda ay eedaysanayaal iyo weliba dembiilayaal qaran ah laakiin waxay ogyihiin in aanay jirin cid la xisaabtamaysaa. Hadda qaylada hayaaydoodu waa hashii geela cunaysay ee hadana cabaadaysay.
Nasiib darrada shacbiga Somaliland kuwii hoojiyay ee hilbahooda halkeeyay ayaa intay shaadh kale u soo xidheen isbedeldoon u sheeganaya laakiin intee ayaa ka rumaysan doonta. Jawaabta waxa sheegi doonta natiijada doorashada waxana ka hadhay maalmo tirsan.